I-Sweet Retreat Historic Bungalow 1880's - I-Airbnb
Le ndlu ixhomekeke ekudibaneni nemigangatho ekhuselekileyo yentsholongwane ye-coronavirus yasekhaya. Le ndlu inkulu enevaranda yenkulungwane inento yonke. Eli khaya lisandul 'ukulungiswa ukuze libe nazo zonke izinto ezinokusetyenziswa eziphuculiweyo ngoxa lisayigcina imbali yakudala. Omnye uza kukwazi ukufikelela lula kwikhaya ngekhowudi yokufaka ikhowudi emnyango ukuze eze ahambe ngendlela afuna ngayo. Ukuba uza nenja kukho imali yezilwanyana zasekhaya eyi- $ 25 ngosuku! Ilayisensi yesithili saseLake # 2022-21
4.84 · Izimvo eziyi-129
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R7928